नेपाली क्रिकेटले कहिल्यै नभुल्ने मिति हो मार्च–१५ अर्थात एक दिवसीय मान्यता पाएको दिन । ठीक एक वर्षअघि आजकै दिन नेपालले जिम्बावेमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ९आइसिसी०बाट चार वर्षका लागि वान डे मान्यता पाएको थियो ।
चार वर्षका लागि पाएको एक दिवसीय मान्यता जोगाउन नेपाललाई निकै चुनौती छ । निलम्बित नेपाल क्रिकेट सङ्घ ९क्यान०का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द क्यान निलम्बन, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्तीलगायत कारण नेपालले एक दिवसीय मान्यता जोगाउन अप्ठेरो पर्ने बताउनुहुन्छ ।
मेस्सीका लागि सिजनको दुखद अन्त्य, कोपा डेल रेको फाइनलमा पनि पराजित
के बार्सिलोनामा भालभर्देको भविष्य सकिएकै हो ?
न्युजील्याण्डसँग भारतको लज्जास्पद हार
मेसीले गोल्डेन बुट जित्दा रोनाल्डो टप १० मा पनि परेनन् !
रोनाल्डोको विकल्प भनिएका लुका जोभिकले रियल मड्रिड जान रुचि देखाएनन्